Banaanbax looga soo horjeedo isbaarooyinka oo ka dhacay Magalada Gaalkacyo. – The Voice of Northeastern Kenya
Banaanbax looga soo horjeedo isbaarooyinka oo ka dhacay Magalada Gaalkacyo.
Star FM August 30, 2018
Haween,Ganacsato iyo dhalinyaro ku nool magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa maanta halkaas waxay ka dhigeen Banaanbax ay kaga cabanayaan dhibaatooyinka isbaarooyinka ka dhashay.
Dadka banaanbaxa dhigayay ayaa sheegay inay caqabado kala kulmaan Kooxo hubeysan oo Gaadiidk Ganacsato gobolka mudug ee u kala gooshaya gobolada kale ee dalka Soomaaliya ku xanibay duleedka Magalada Gaalkacyo,kadib isbaarooyin la soo dhigay deegaanadaas.
Banaanbaxayaasha ayaa dhagxaan Waaweyn ku xiray Wadooyinka kala qeybiya Koonfurta iyo Waqooyiga Magalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
Qaar ka mid ah banaanbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in duleedka gaalkacyo maleeshiyaad hubeysan ay uga xayireen Gaadiid wada Xoolo iyo badeecooyin kale oo ay leeyihiin Ganacsatada gobolka,waxaayna ka dalbadeen Madaxda maamulka Galmudug inay waxka qabtaan dhibaatada jirta.
Qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ayaa marar badan shacabku waxay ka cowdaan kooxo hubaysan oo isbaarooyin dhigta wadooyinka xiriiriya magaalooyinka qaar waxana goobahaas shacabka looga qaadaa lacago sharci daro ah sidoo kale waxaa mararka qaar dhacday in kooxaha isbaarooyinka dhigtay ay dhibaatooyin nafeed u gaystaan dadka safarka ah.
← Ciidamada Israa’iil oo xiray 16 falastiiniyiin ah
DHAGEYSO Xukuumada Soomaaliya oo maanta olole Nadaafadeed ka samaysay Stadium Muqdisho. →